ကျောက်နီမော် အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့လုပ်ရပ် ဒေသခံ တွေ ရဲ့ဒေါသ ကို ဆွပေးသလို ဖြစ်နေ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
ကျောက်နီမော် အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့လုပ်ရပ် ဒေသခံ တွေ ရဲ့ဒေါသ ကို ဆွပေးသလို ဖြစ်နေ
Posted by Sea on June 20, 2012 at 3:30am
မေလ ၂၈ ရက်နေ့ညက ဘာသာခြား လူငယ် သုံးဦး ၏ မုဒိမ်းကျင့်
သတ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံခဲ့ ရသည့် မသီတာထွေး ၏ ဇာတိ မြို့ 
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့ကျောက်နီမော် ကျေးရွာ တွင်
အာဏာ ပိုင်များ က ဒေသခံ ရခိုင် လူ မျိုး များ ကို ပိုမို ဖိနှိပ် လာ
သည် ဟု FNG မှ စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
မသီတာထွေး အား မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည့် တရားခံ ၃ ဦး အား ထောက်ပံ့ရန် အတွက် ၎င်း တို့နှင့် သက်
ဆိုင်သည့်ဘာသာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာ သို့ လာသည့်အခါ အာဏာပိုင် များ နှင့် တွေ့ ဆုံ ကြ ပြီး
လိုက်လျှော ဖောရွေစွာဆက် ဆံ ကြသည် ဟုဆိုသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ် များ က ဂရုနာ ကြေး အဖြစ် မသီတာထွေး ၏ မိဘများ ကို ငွေကြေး ပေး သည့်အခါ အာဏာ ပိုင်များ က
ကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် မိဘ များ ကို သွားရောက် ပေးကမ်းပြီး ဖခင် ဖြစ်သူ ဦးလှတင် နှင့် အကို ဖြစ်သူ ဦးဝင်း
တင် တို့က လက်မခံ သည့် အခါရပ်မိ ရပ်ဖ များ ၊ ဘုန်းတော် ကြီး များ မှ တစ်ဆင့် အတင်း အကျပ် ပေး ခြင်း တို
့ ကို လုပ်ဆောင် ပြီး ဗိုလ်မှုးကျော်ခင် ဆိုသူ မှာ မယူလျှင် ပြစ်သတ် မည် ဟု ပင် ခြိမ်းခြောက် ခဲ့သည်။
ကျောက်နီမော် ဈေး ကိုလည်း ရခိုင် တိုင်း ရင်းသား များ နေသော နေရာ နှင့် အလှမ်းဝေးသည့် ဘာသာခြား များ
နှင့် နီးရာနေရာ သို့ရွှေ့ လိုက် ၍ လက်လုပ်လက်စား ဈေးသူ ဈေးသား များ မှာ အခက် ကြုံရသည် ဟု သိရသည်။.
ကျောက်ထရံ တွင် ရခိုင် ရပ်ကွက် များ အတွင်း ဉ် မိုးရာသီ လမ်းများ ပျက်စီးနေသော် လည်းပြု ပြင် ခြင်း မရှိ ဘဲ
အခြားဘာသာ ၀င်များ က ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဟု အမည်ခံ ပြီးပြင်သည့်လမ်းများ တွင် မူ အာဏာ ပိုင် များ က လို
အပ် သည့်ပစ္စည်းများ ကို စစ်တွေ ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ရန် ကုန် တို့မှ မှာယူပေး ခဲ့သည်။
ရခိုင် တိုင်းရင်းသား အိမ် များ တွင် ဒီဇယ် နှင့် ဓာတ် ဆီ သိုလှောင် ခွင့် ကိုလည်း အာဏာပိုင်တို့က ကန့် သတ်
မူလလင့် http://freedomnewsgroup.com/ ကြည့်သူဦးရေ: 658
Tags: သတင်း Like3members like this
Comment by yuyahtway on June 21, 2012 at 5:44pm ဒိဗိုတ်မှူးကျော်ခင်ဟာ ၇ခိုင်သား(လေးတောင်သား)တဲ.။အသားထဲက လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာဟာဒါမျိုးကိုပြောတာ။ရခိုင်သူတစ်ယောက်အနေနှင်.အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ရှင်။ Comment by yuyahtway on June 21, 2012 at 5:41pm ဒိဗိုတ်မှူးကျော်ခင်ဟာ ၇ခိုင်သား(လေးတောင်သား)တဲ.။အသားထဲက လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာဟာဒါမျိုးကိုပြောတာ။ရခိုင်သူတစ်ယောက်အနေနှင်.အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ရှင်။ Comment by မိုးလေး on June 21, 2012 at 3:46pm အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ ကြားရပြန်ပြီ .......။စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အားဆို ..။ Comment by soehtiketan on June 21, 2012 at 10:40amွှအမှန်တရားကနောက်ကျခဲ့ရင် ...........
Comment by yehtetsoemg on June 21, 2012 at 10:36am ခွေးမျိုးတွေက ခွေးဇာတ်ပဲ ခင်းမှာပေါ့ကွာ............... Comment by tuntuns on June 20, 2012 at 10:22pm အာလုံးညီညွတ်ကြပါ ပျက်စိးတာဘယ်သူပိုများလို့ Comment by မောင်အေးသိန်း on June 20, 2012 at 9:22pm ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်ပါစေနှင့်။
Comment by kyawoo on June 20, 2012 at 7:07pm အဖြစ်မှန်ကို သိကြသော လူများခများ သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်ကို တိုင်ကြပါလို ပြောချင်တယ်
ကျုပ်တိုနိုင်ငံမှက စိတ်ဓါအောက်တန်းကျတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ
ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ဟာ နိုင်ငံခြားမှ အလုပ် လာလုပ်နေရတာပေါ့ Comment by EDWARD SOE on June 20, 2012 at 9:39am ကောလ ဟာလ ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ စဉ်းစားပြီး သုံး သပ်ကြ ပါ။ Comment by လေပြေ on June 20, 2012 at 8:48am ဟုတ်ပ...ပိုက်ဆံကလုပ်ခဲ့တာတွေ့အားလုံးပြီးသွားရောလား ‹ နောက်သို့
9. Chit Snow